admin – Page3– Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
March 31, 2020adminAnnouncements, News & Announcements
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ရုံးသုံးပရိဘောဂပစ္စည်း(၈) မျိုးဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါကော်မတီက သတ်မှတ်စံနှုန်းများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီစိစစ်ရွေးချယ်ပြီးနောက် ဤဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ တင်ပြ အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့ရာ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ကော်မတီအစည်းအဝေးက အောက်ပါကုမ္ပဏီ(၂) ခုမှ ပူးတွဲပါပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါသည်- စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ဝယ်ယူမည့်ကုမ္ပဏီအမည် (က) Officer Table (ကျွန်း) New Era Technology (ခ) Armed Chair (ကျွန်း) New Era Technology (ဂ) Table (ကျွန်း) New Era Technology (ဃ) Armless Chair (ကျွန်း) New Era Technology (င) File...
March 24, 2020adminAnnouncements
လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19ရောဂါနှင့် ပတ်သတ်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးအချက်အလက်များ
လေကြောင်း၊ ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသများမှတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသူများအတွက် COVID-19ရောဂါနှင့် ပတ်သတ်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သတိပေးအချက်အလက်များ download here
1. The Ministry of Health and Sports has undertaken international monitoring, monitoring of the current epidemic of COVID-19 in the world. At the checkpoint Hospital-based Through public-based monitoring; We are working in partnership with private hospitals. 2. In doing so, on 14-3-2020, From 6:00 pm to 15-3-2020 pm There were eight new patients on the watch until 6:00...
March 13, 2020adminCovid-19 Lastest News
The Secretary-General of the World Tourism Organization (UNWTO) Zurab Pololikashvili ledahigh- delegation to the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva to further advance the two agencies’ coordinated response to the worldwide Coronavirus COVID-19 outbreak. WHO Director-General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus welcomed the delegation to Geneva and thanked UNWTO for its close collaboration...
March 6, 2020adminAnnouncements, News & Announcements
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန တရုတ်ဘာသာအထူးပြု ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်း(မန္တလေး) သင်တန်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာကြေငြာချက် ၁။ တရုတ်ဘာသာအထူးပြု ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်များမွေးထုတ်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဟိုတယ် နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ကြီးကြပ်စီစဉ်မှုဖြင့် တရုတ်ဘာသာအထူးပြု ဒေသဆိုင်ရာဧည့်လမ်းညွှန်အခြေခံသင်တန်းကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် ၁၀-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ဖွင့်လှစ်ပို့ချရန် သင်တန်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂။ လျှောက်ထားသူများ၏ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ အတွက် သင်တန်းဝင်ခွင့် ရေးဖြေ/နှုတ်ဖြေ စစ်ဆေးခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း စစ်ဆေးသွား မည်ဖြစ်ပါသည်- (က) ဝင်ခွင့်ရေးဖြေ စစ်ဆေးခြင်း (၁) နေ့ရက် – ၇-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၂) အချိန် – နံနက် (၀၉:၀၀ )နာရီမှ (၁၁:၀၀) နာရီအထိ (၃) နေရာ –...
January 9, 2020adminAnnouncements, News
မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မူပြိုင်ပွဲ Myanmar Skills Competition 2020 အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်အား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၁။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် (၁၃)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကျွမ်းကျင်မူပြိုင်ပွဲ(World Skills ASEAN 2020- Singapore) သို့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပြိုင်ပွဲဝင်လူငယ်များကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) မှ ကြီးမှူးကျင်းပမည့် ပြိုင်ပွဲများအနက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီမှ ဦးဆောင်ကျင်းပမည့် Restaurant Service Skill အလုပ်အကိုင်နှင့် Cooking Skill အလုပ်အကိုင် ပြိုင်ပွဲများကို ၂၄-၁-၂၀၂၀ မှ ၂၆-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ စက်မှုအထက်တန်းကျောင်း(အင်းစိန်) ရန်ကုန် မြို့တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်း၊ အသင်း၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင် များမှ လာမည့်...
December 23, 2019adminAnnouncements
ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာနအတွက် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီးရုံးနှင့်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့၏၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူရန် ၂၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၁၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ ကုမ္ပဏီ/ဆိုင်(၃)ခုမှ အဆိုပြုလွှာများ တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ ၂။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီများ၏ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအဆိုပြုလွှာများကို၁၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန ၊ နီလာခန်းမတွင် တင်ဒါကော်မတီ၀င်များ ၊ အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းသူများ၏ ရှေ့၌ တင်သွင်းလာသည့် ဈေးနှုန်းများကို ဖွင့်ဖောက်စိစစ်ခဲ့ပါသည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီးရုံးနှင့် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့အတွက် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါကော်မတီ၏ရွေးချယ်မှု၊ ၀န်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့်CD-Link Company Limited မှ ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာပစ္စည်းများ၀ယ်ယူရန်အတည်ပြုရွေးချယ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ တင်ဒါကော်မတီ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး၀န်ကြီးဌာန